Guyyaa Jaalalaa (St. Valentine’s Day) – Awash Times
Guyyaa Jaalalaa (St. Valentine’s Day)
February 14, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Guyyaan jaalalaa kun biyyoota afaan ingiliffaa dubbatanitti akka aadaatti xalayaa jaalalaa fi nagaa walii ergudhaan kabajama.
Guyyaa kana kabajuun yoom jalqabame?
Guyyaan kun kan kabajamu jalqabe gara dhuma bara 1500 akka ta’e kan ammanamu yoo ta’u, Guraandhala 14 bara baraan kabajama. Guyyaan kun kan filatameefis akka himatti simbirtootatu guyyaa kanatti walquunnamtii saalaa godhachu jalqaban jedhametu himama.
Kan bira immo Ayyaana Juno jedhamu ayyaana dubartiifi bulti kan bakka bu’u yoo ta’u. Ayyaana kanatti akka bultiin tokko firi (daa’ima) argatan kan Waaqa isaani itti kadhatan ture. Ayyaani kun garaandha 15 irraa jelqabetu kabajama ture.
Gara mana amantaattin immoo kristaanooto dur turan maqaan isaani Valantine ykn Valantinus jedhamu yaadachuuf kabajama ture. Yoo xiqqaate nama lama (Qeesi tokkoofi Phaaphaasi tokkoo) yaadachuf jalqabame ture. Irra caala Phaaphaasi bara (270) tilmaamaan erga Eyesus dhalatee booda motii Claudius II Gothius tajaajiilaa ture, hojii isaa yaadachuuf kabajama ture. Bara kan Phaaphaasiin kun dhaamsa mootiirraa akka hoomaa waraanaatiif dabarsuuf ergame dhiise waraana kana eebbisee debi’e. Kanarraa kan ka’ee motiichii arudhaan Phaaphaasichii akka ajjefamu ajaja dabarse. Phaaphaasichiis odoo in ajjeefamin dura xalayaa jaalalee isaa Julia dhaaf bareeseefi ture. Xalayaa dhumaratiis “Valentin keetiirra” jedhun mallateese ture.
Guyyaan jaalalaa kun dur dur biyyoota afaan ingilifaafi faransaay dubbatan keessatti qofa kabajamaa ture. Boodaratti garu biyoota biraa keessatiis kabajaamu jalqabe.
Guyyaa kana akkamitti kabaju?
Guyyaa kana xalayaa wali bareessudhaan, Post kaardii wali ergudhaan, abaaboo walii ergudhaan fi keennaa adda addaa wali keennuudhaan kabajama.
Biyya Gaanaatti fkn. chakoolaata wali ergudhaan kabaju. Guyyaa kanas guyyaa Chakoolaata biyyooleessaa jedhani mogaafataniru. Turisimii biyyattis asumaan gudifattu.
Previous Post: Haala siyaasa Oromoo amma irratti yaada
Next Post: ጠ/ሚ ዐቢይ ከዓረብ ሀገራት ለተውጣጡ ኢትዮጵያውያን በዱባይ አል አህሊ ስታዲየም የስተለላፉት መልዕክት